ကဘူးလ်မြို့တွင် သံသယဖြစ်ဖွယ် ISIS-K မော်တော်ယာဉ်အား ပစ်မှတ်ထားကာ အမေရိကန် လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ် - Xinhua News Agency
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ မြို့တော် ကဘူးလ်ရှိ လမ်းမတစ်နေရာတွင် တာလီဘန် တိုက်ခိုက်ရေးသမားများအား တွေ့ရစဉ် (ဆင်ဟွာ)
ဝါရှင်တန်၊ ဩဂုတ် ၃၀ ရက် (ဆင်ဟွာ)
အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံ ကဘူးလ်မြို့တွင် သံသယဖြစ်ဖွယ် ISIS-K မော်တော်ယာဉ်တစ်စီးအား ပစ်မှတ်ထားကာ အမေရိကန်စစ်တပ်က လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း၊ ယင်းမော်တော်ယာဉ်သည် လေဆိပ်အား ဦးတည်မောင်းနှင်၍ တိုက်ခိုက်ဖွယ်ရှိနိုင်ကြောင်း အမေရိကန် ဗဟိုကွပ်ကဲရေးဌာနက ဩဂုတ် ၂၉ ရက်တွင် ပြောကြားခဲ့သည်။
လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ “Hamad Karzai နိုင်ငံတကာလေဆိပ်ကို ခြိမ်းခြောက်လာနိုင်တဲ့ ISIS-K ကို ရှင်းလင်းနိုင်ခဲ့ပါတယ်” ဟု အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံရှိ ဒေသတွင်း အိုင်အက်စ် မိတ်ဖက်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အား ရည်ညွှန်းလျက် အမေရိကန်နိုင်ငံ ဗဟိုကွပ်ကဲရေးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဘီလ် အာဘန် (Bill Urban) က ထုတ်ပြန်ချက်၌ ပြောကြားထားသည်။
“ကျွန်တော်တို့ ပစ်မှတ်ကို အောင်မြင်စွာထိထိမိမိပစ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။ မော်တော်ယာဉ်ကနေ သိသာတဲ့ ဆင့်ပွားပေါက်ကွဲမှုတွေဖြစ်သွားတာဟာ အဲဒီယာဉ်ပေါ်မှာ ပေါက်ကွဲစေတတ်တဲ့ ပစ္စည်းအမြောက်အများရှိနေတာကို ဖော်ညွှန်းနေပါတယ်” ဟု အာဘန်က ဆိုသည်။
“ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ အဲဒီအချိန်မှာ အရိပ်အယောင်လုံးဝ မတွေ့ခဲ့ရပေမဲ့ အရပ်သားသေဆုံးမှုရှိနိုင်ခြေတွေကိုတော့ ကျွန်တော်တို့ တွက်ချက်နေပါတယ်။ နောက်ပိုင်းခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်နိုင်ခြေတွေအတွက် ကျွန်တော်တို့ နိုးနိုးကြားကြားရှိနေမှာပါ” ဟု ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်က ပြောကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံ သမ္မတ ဂျိုးဘိုင်ဒန်က “လာမည့် ၂၄ နာရီမှ ၃၆ နာရီအတွင်း” နောက်ထပ် ကဘူးလ်လေဆိပ် တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်နိုင်ကြောင်း ဩဂုတ် ၂၈ ရက်က သတိပေးချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးနောက် လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှု ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းဖြစ်သည်။
ယင်းသို့ လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုသည် ဩဂုတ် ၂၆ ရက်က အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင် ၁၃ ဦးနှင့် အာဖဂန်လူမျိုး ၁၇၀ခန့် သေဆုံးခဲ့ရသော ကဘူးလ်လေဆိပ်အပြင်ဘက် အသေခံဗုံးဖောက်ခွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် အမေရိကန် စစ်တပ်၏ ဒုတိယမြောက် လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုလည်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်မှုများမှာ ၎င်းတို့လက်ချက်ဖြစ်ကြောင်း ISIS-K က ထုတ်ဖော် ပြောကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန် စစ်တပ်က အာဖဂန်နစ္စတန် အရှေ့ပိုင်း နာဂါဟာပြည်နယ်ရှိ အကြမ်းဖက်အုပ်စုသို့ ဩဂုတ် ၂၇ ရက်က ဒရုန်းဖြင့် လက်တုန့်ပြန်တိုက်ခိုက်မှု တစ်ခုပြုလုပ်ခဲ့ရာ ထင်ရှားသောအဖွဲ့ဝင် နှစ်ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး နောက်ထပ်တစ်ဦးလည်း ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်း ပင်တဂွန်၏ ပြောကြားချက်အရ သိရသည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ဩဂုတ် ၁၅ ရက်တွင် ကဘူးလ်မြို့သို့ တာလီဘန်ဝင်ရောက်ချိန်မှစ၍ နိုင်ငံအတွင်းရှိ အမေရိကန်နိုင်ငံသားများနှင့် အာဖဂန် မိတ်ဖက်များအား ကယ်ထုတ်ရေး စီစဉ်လျက်ရှိသည်။ ဩဂုတ် ၁၄ ရက်မှစ၍ အာဖဂန်နစ္စတန်မှ လူပေါင်း ၁၁၁,၉၀၀ ခန့် ကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ကြောင်း အိမ်ဖြူတော်က ဩဂုတ် ၂၈ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
Source: Xinhua| 2021-08-30 01:39:57|Editor: huaxia
WASHINGTON, Aug. 29 (Xinhua) — U.S. Central Command said on Sunday that U.S. military forces carried out an airstrike in Kabul againstasuspected ISIS-K vehicle, which could pose an imminent threat to the airport.
The airstrike eliminated “an imminent ISIS-K threat to Hamad Karzai International airport,” U.S. Central Command Spokesman Bill Urban said inastatement, referring toalocal affiliate of the Islamic State in Afghanistan.
“We are assessing the possibilities of civilian casualties, though we have no indications at this time. We remain vigilant for potential future threats,” said the spokesman.
The airstrike came after U.S. President Joe Biden warned on Saturday that another terror attack against Kabul airport could be “highly likely in the next 24-36 hours.”
In retaliation for the deadly attack, the U.S. military on Friday launchedadrone strike against the terror group in Nangarhar province of eastern Afghanistan, which killed two “high-profile” members and wounded another, according to the Pentagon.
The United States has been scrambling to evacuate Americans and its Afghan partners from the country since the Taliban entered Kabul on Aug. 15. The White House said on Saturday that around 111,900 people had left Afghanistan since Aug. 14. Enditem
Photo: Taliban fighters are seen onaroad in Kabul, capital of Afghanistan, Aug. 28, 2021. (Photo by Saifurahman Safi/Xinhua)
ဗိုင်းရပ်စ်မူလဇစ်မြစ် ခြေရာခံခြင်းသည် သိပ္ပံပညာရပ်ဆိုင်ရာကိစ္စသာဖြစ်ပြီး စုံးစမ်းထောက်လှမ်းခြင်းအတွက် မဟုတ်ပေ။ အမေရိကန် စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအသိုင်းအဝိုင်းက ကောင်းကျိုးမရှိသော သတင်းအစကို ဆွဲထုတ်နေခြင်းသာဖြစ်သည်။ (Xinhua)